Milkaa’ina dhabuu Qabsoo Bilisummaa Oromootiif komatamaan eenyu? - Independent Oromia
Qabsoon Bilisummaa Oromoo akka galma hin geenyeef maaltu taasise?
Dogoggoroota mooraa Qabsoo Bilisummaa Oromoo keessatti dhalatanii fi kufaatiilee Uummata Oromoo mudataniif komatamaan eenyu?
Galmi Qabsoo Bilisummaa Oromoo eessa? Uummanni Oromoo Galma Qabsoo isaa ga'uuf maal gochuu qaba?… Marii Oromticha Walloo tokko waliin taasifame.
Dargaggootaa fi ol-adeemtota Oromoo jajjaboo ta'an adamsanii ukkaamsuu/hidhuu MKIIn raawwatamuun wal-qabatee, Qeerroon Oromoo, Yuusuuf Umar Hasanee jedhamu – dhalataa fi jiraataa Konyaa Harargee Bahaa, Ona Dirree Xiyyaaraa – WBO waliin hidhata qabda jedhamuun, Wiixata Waxabajjii 28, 2021, Poolisoota Humna Addaa Mootummaa Naannoo Harariin, Magaalaa Harar keessaa butamuun, Koomishiinii Poolisii Naannoo Harariitti hidhamee jiraachuu.
Sagantaa - Kibxata Adoolessa 6, 2021
Sagantaa - Dilbata Adoolessa 4, 2021
Sagantaa - Kamisa Adoolessa 1, 2021